MR MRT: သိမ်မွေ့သောလမ်း (၁၀)
လှပမှုတစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ မိနစ် အနည်းငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၀င်လေထွက်လေ မိတ်ဆွေနဲ့ အတူရှိနေတဲ့ အခါမှာ ငါ ဘာလဲ ဆိုတာကို မေ့ထားလိုက်နိုင်ပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုး၊ သီရိလင်္ကာလူမျိုး၊ ဂျာမန်လူမျိုး၊ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးစတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေကို မေ့ထားလိုက်နိုင်ပါတယ်။ လူမျိုးကွဲပြားမှု၊ ဘာသာကွဲပြားမှုစတဲ့ ကွဲလွဲမှုတွေ အမျိုးမျိုး ဒီကမ္ဘာမှာ ရှိနေပါတယ်။ တစ်ချို့ ပြဿနာတွေဟာ လူတွေက ဒီ ကွဲလွဲမှုတွေကို အလေးပေးလွန်းတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရတာပါ။ အသက်ရှူမှုနဲ့အတူ ရှိနေတဲ့ အခါမှာ ဒီလို ကွဲလွဲမှု အားလုံးကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အသက်ရှူမှုပဲ ရှိပါတော့တယ်။ အသက်ရှူမှုဟာ အသက်ရှူမှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်ရှူမှု ရှိနေပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက . . . အသက်ရှူမှုနဲ့အတူ ရှိနေရင် စိတ်ထဲမှာ တည်တံ့မှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ ဆိတ်ငြိမ်မှုတွေ တွေ့ကြုံရပါတယ်။ ဒီလို တည်တံ့မှု၊ စူးစိုက်မှု၊ ဆိတ်ငြိမ်မှုကို ဗုဒ္ဓဘာသာက သမထလို့ နာမည်ပေးပါတယ်။ ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းက အေးဆေးတည်ငြိမ်မှု သမထကို ရရှိစေနိုင်တာဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ ပါပဲ။ အတွေးတွေကို အတွေးလို့ပဲ ရှုမြင်ဖို့၊ မှန်ထဲမှာ ကြည့်သလို အတွေးတွေကို ကြည့်ဖို့ ပြောခဲ့ပြီးသားပါ။ အတွေ့အထိကို သိရုံပဲ သိဖို့၊ အသံတွေကို သိရုံပဲ သိဖို့ပါ။ အရာရာကို အရှိအတိုင်း မြင်နိုင်အောင် လေ့လာအားထုတ်ဖို့ပါ။ အရေးကြီးတဲ့ ဉာဏ်အမြင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကမ္မဋ္ဌာန်နည်းက နေ့စဉ်ဘ၀မှာ အထောက်အကူ ရသလား။ ကူရှင်ပေါ် ထိုင်နေတုန်းမှာ အထောက်အကူ ရသလား။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ မေးခွန်းပါ။ ထိုင်နေရင်းနဲ့ ဒီအမြင်တွေ ဒီစွမ်းရည်တွေ ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဖို့၊ သိမှတ်မှုကို ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဖို့၊ တုံ့ပြန်မှု မရှိတဲ့ ဥပေက္ခာစိတ်ကို ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ နေစဉ် ဘ၀မှာ အဲဒီလိုစိတ်ဓာတ် ရှိနေဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
၀င်လေထွက်လေကို သိမှတ်ခြင်း အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းရဲ့ အရေးကြီးပုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ လက္ခဏာသွင်ပြင်တွေကို ဒီဟောပြောချက်မှာ တင်ပြဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ပြောစရာတွေ ရှိသေးပေမယ့် အချိန် မရတော့ပါဘူး။ ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့ ပတ်သက်လို့၊ အခု ကျွန်တော် ပြောခဲ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးခွန်းတွေ မေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ယောဂီ။ ။ အခု ကျွန်တော်တို့ လေ့လာရတဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ တစ်ခြားဘာသာတွေက သင်ပြတဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်း ဘယ်လို ထူးခြားတယ် ဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။
ဆရာကြီး။ ။ ဒါက သီအိုရီနဲ့ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းပဲ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လက်တွေ့ကျတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ကျွန်တော် ပိုပြီး သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီ သီအိုရီ မေးခွန်းကို ဖြေပါ့မယ်။ တစ်ခြားဘာသာတွေလို့ ပြောလိုက်တော့ ဘာသာတွေ အများကြီး ပါနိုင်ပါတယ်။ ဘာသာတရားမှာ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို အလေးပေးထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ စိတ်တည်တံ့အောင်၊ စိတ်ငြိမ်သက်အောင် လုပ်နည်းတွေ ပါပါတယ်။ ခရစ်ယန် ဘာသာမှာ ပါတာလေးတစ်ခု တော်တော် လှပါတယ်။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပါ၊ ငါဟာ ထာဝရဘုရား ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိပါတဲ့။ ဘာသာအမျိုးမျိုးမှာ နည်းလမ်းတွေ အမျိုးမျိုး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အခြေခံမူကတော့ အတူတူပါပဲ။ တည်တံ့တဲ့စိတ်၊ ငြိမ်သက်တဲ့စိတ်၊ လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ကို တွေ့ကြုံခံစားဖို့ နည်းလမ်းတွေချည်းပါပဲ။
နောက်ပြီးတော့ ဘယ်အစဉ်အလာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုရင် သတိရှိတာ၊ သိတာ၊ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတာကို နားလည်တာတွေ ပါတာချင်း အတူတူပါပဲ။ ဘယ်ဘာသာက ကမ္မဋ္ဌာန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနှစ်မျိုး ပါဝင်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ တစ်ခြား မေးစရာ ရှိပါသေးလား။ ပြောလက်စ ကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ လက်တွေ့ကျတဲ့ မေးခွန်းတွေ လိုချင်ပါတယ်။
ယောဂီ။ ။ အသက်ရှူမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာလုပ်ရမလဲ။ အသက်ရှူတာရဲ့ သက်ရောက်မှုကို ဘယ်လို ခံစားရမှာလဲ။
ဆရာကြီး။ ။ အသက်ရှူတာရဲ့ သက်ရောက်မှုကို တွေ့ကြုံခံစားစရာ မလိုပါဘူး။ အလုပ်ပေး ကမ္မဋ္ဌာန်းချိန်ကျရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပါ့မယ်။ လုပ်ရမှာက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ။ ခန္ဓာကိုယ် အသက်ရှူနေတဲ့ အခိုက်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတာကို ခံစားရုံပါပဲ။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ အာရုံခံစားရမှုကို အသုံးပြုပြီးတော့ သတိရှိနေဖို့ သိနေဖို့ပါပဲ။ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး လုပ်စရာ မလိုတဲ့အကြောင်း ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ ၀င်လေနဲ့ ထွက်လေကို သိနေရုံပါပဲ။
ယောဂီ။ ။ တရားအားထုတ်နေရင်း ပင်ပန်းလာနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ချင်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
ဆရာကြီး။ ။ သိပ်ကောင်းတဲ့ မေးခွန်းပဲ။ လက်တွေ့ဆန်တယ်။ တစ်ခု အကြံပေးချင်တာက . . . မျက်လုံးတွေ ဖွင့်လိုက်ပါ။ နောက်တစ်ခုက . . . ဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာ အလေးပေး ဖော်ပြထားပါတယ်။ ခါးရိုးကို ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ် ထားပါတဲ့။ ပုံမှန်အားဖြင့် ခါးရိုးကို မတ်မတ်ထားတယ်ဆိုရင် အိပ်ချင်ငိုက်မျဉ်းတာ မဖြစ်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက . . . မတ်တတ်ရပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နည်းနည်းကို စမ်းကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေမပြေ ကြည့်ပါ။ မေးစရာ ရှိပါသေးလား။
ယောဂီ။ ။ ပထမ မေးခွန်းက . . . ကျွန်တော်တို့ တရုတ်တွေ ပြောကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ စိတ် တစ်စိတ်ပဲ ရှိတယ်တဲ့။ တစ်စိတ်တည်းနဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာ နှစ်ခု မသိနိုင်ဘူးတဲ့။ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ အများအားဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်။ အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အသက်ရှူမှုနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့နိုင်မှာလဲ။
ဒုတိယ မေးခွန်းက . . . အသက်ရှူမှုဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ၊ အိပ်ပျော်နေတဲ့အခါတောင်မှ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူရှိနေတဲ့ မိတ်ဆွေလို့ ခင်ဗျား ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် အိပ်မက်မက်နေတဲ့အခါမှာ အသက်ရှူမှုကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သတိထား စောင့်ကြည့်နိုင်မှာလဲ။
ဆရာကြီး။ ။ ဒုတိယ မေးခွန်းကို အရင်ဖြေပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀င်လေထွက်လေ မိတ်ဆွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာက . . . မိတ်ဆွေကို ပစ်ထားနိုင်တဲ့ အချိန်တွေ ရှိပါတယ်။ အိပ်မက်မက်နေတာ၊ အိပ်ပျော်နေတာ မဟုတ်လား။ အသက်ရှူမှုကို သိနိုင်ဖို့ အသိရှိရပါတယ်။ သတိရှိရပါတယ်။ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်တဲ့ ယောဂီဆိုရင်တော့ အိပ်ပျော်နေတုန်း အိပ်မက်မက်နေတုန်းမှာလည်း သိမှတ်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ အိပ်ပျော်နေတုန်း အိပ်မက်မက်နေတုန်းမှာ ဘယ်သူ သိမှတ်နိုင်မှာလဲ။ ကျွန်တော့်အဖြေက . . . အဲဒီလို အချိန်မှာ ၀င်လေထွက်လေ မိတ်ဆွေကို ပစ်ထားလိုက်ပါ။ မိတ်ဆွေက စိတ်ဆိုးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက် မေးခွန်းက . . . နေ့စဉ်ဘ၀မှာ အလုပ်မျိုးစုံ လုပ်ရကြရတယ်။ အလုပ်မျိုးစုံ လုပ်ရတဲ့ အခါမှာ မိတ်ဆွေကို ဂရုစိုက်နေရင်းနဲ့ အလုပ်တွေ ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာလဲ။ မိတ်ဆွေကို သတိရဖို့အတွက် အလုပ်ရပ်လိုက်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပြီးသားပါ။ မီးပွိုင့်နီနေတုန်း၊ ဘာမှ လုပ်စရာ မရှိတဲ့အချိန်မှာ မီးပွိုင့်နီတာကို မကျေမနပ် ဖြစ်မနေဘဲ မိတ်ဆွေကို သတိရလိုက်ပါလို့ ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှု တစ်ခုခု ရှိနေတဲ့ အချိန်၊ ခံစားမှုကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အလုပ်မျိုးစုံ လုပ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ . . . အသက်ရှူမှုဆီ ပြန်လာပေါ့။
ဒီမေးခွန်းကို ဖြေကြားချင်တာက . . . လုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိလာတဲ့အခါမှာ ယောဂီတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိတဲ့အခါမှာ ဒီလို စဉ်စားမိနိုင်ပါတယ်။ လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိတယ်၊ အမှားလုပ်မိနိုင်တယ်လို့ စဉ်းစားမိနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ တင်းကြပ်မှု ဖြစ်လာပါတယ်။ မနေ့က ပြောခဲ့သလို . . . မှန်မှန်ကန်ကန် ခြောက်ပြစ်ကင်းအောင် လုပ်ဖို့ အလေးပေးတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမှာ ဘာလုပ်လုပ် အပြစ်ကင်းအောင် လုပ်ချင်ကြပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ လုံးဝဥဿုံ ပြီးပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရုံနဲ့ ပြေလည်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါက အကြံပေးချက် တစ်ခုပါ။
Posted by Ashin Acara. at 10:14 PM